Titanium Casting Services - Custom Casting Titanium Parts Company China - Minghe Casting
IATF 16949 FANORENANA CAST NY FANAVOTANA TITANIUM
Inona no atao hoe Casting Titanium? Casting Titanium firaka dia manondro ny fizotry ny fandrendrehana sy ny fanidinana ireo fitaovana titanium ao anaty fanariana eo ambanin'ny fantsom-panafody na fiarovana. Ny ankamaroan'ny firaka titanium tsy milamina dia manana fananana mandatsaka tsara. Ny iray amin'ireo be mpampiasa indrindra dia ny firaka Ti-6A1-4V. Izy io dia manana ny fahombiazan'ny dingana fanariana tsara indrindra sy ny rafitra miorina, ary manana tanjaka tsara (5σb≥890MPa) ary ny hamafin'ny vaky ambanin'ny 350 ° C.
Ny fanariana titanium dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny aerospace. Ny ampahany manan-danja ampiasaina dia: casing compressor engine, casing intermière, blades, guide hollow, peratra anatiny, turbocharger impeller, fitoeran-trano sy fanampiana, fiaramanidina fiaramanidina, elo efi-trano, lugs, andry fohy, slide flap Wing, akorandriaka; kabine fanaraha-maso ny balafomanga, elatry ny rambony, lohany aoriana amin'ny balafomanga, faran'ny vahoaka sns. zanabolana artifisialy, bara fanaovana scanner, barila famolavolana sns ... Ampiasaina betsaka amin'ny indostria sivily hanamboarana vatana paompy tsy mahazaka harafesina, valves, impellers; paosin-kaody ho an'ny sambo; akorandriaka, fonosana ary varingarina ho an'ny milina marina; tonon-taolana artifisialy sy singa fivarotan-tena amin'ny fampiasana fitsaboana; loha golf ho an'ny fitaovana fanatanjahan-tena, soavaly Fitaovana, faritra bisikileta, sns.
Minghe dia orinasan-tsolika titanium China izay manampahaizana manokana amin'ny famokarana faritra titanium mandritra ny 35 taona mahery, miaraka amin'ny fitaovana mandroso sy fitaovana ao an-trano, milina mahay ary manam-pahaizana manan-talenta, afaka manome serivisy fanariana titanium be dia be izahay ary ampanjifaina ny fizarana titanium kalitao. famaritana marina, vidin'ny teti-bola ary fandefasana ara-potoana arakaraka ny zavatra takinao. Ao amin'ny magazay fanariana titanium anay, Die Casting, Casting Sand, Casting Investment, Lost Foam Casting ary dingana maro hafa no misy, ary koa ny famitana farany ambony. Ny laharanay misy ny singa titanium sy ny titanium dia azo ampiasaina amin'ny indostria sy fampiharana marobe, mazàna ao anatin'izany ny faritra fiaramanidina sy ny fasteners, ny motera turbinina entona, ny compressor, ny casings, ny fiasan'ny motera ary ny ampinga hafanana. Izahay dia mikendry ny hametraka fiaraha-miasa akaiky sy sariaka amin'ireo mpanjifa manerantany.
Mifandraisa aminay ny injenieran'ny partie titanium anio hiresaka momba ny mombamomba ireo tetikasanao sarotra.
Ny tantaran'ny fanariana firaka Titanium.
Ny Titanium dia tena mavitrika amin'ny fanjakana an-idina. Nandritra ny fotoana ela, tsy azo atao ny mahita fomba fanariana mety sy fitaovana maodely. Vokatr'izany, ny titanium mandefa dia mihemotra ao aorinan'ny firaka titanium tsy milamina mandritra ny 20 taona mahery. Nanomboka tamin'ny 1956 ka hatramin'ny 1962, ny American Bell (Beal) sy ny hafa dia namolavola teknolojia fanalefahana akorandriaka azo ampiasaina amin'ny arc, izay nahatonga ny casting titanium niditra tamin'ny fomba ofisialy ny famokarana indostrialy. Tamin'ny taona 1970 dia nanomboka nampiasaina teo amin'ny sehatry ny aerospace izy io. Hatramin'ny taona 1970, ny haitao titanium firavaka lehibe manamboatra rindrina matevina dia novolavolaina sy nampiharina. Raha ny fiheverana fa ny zava-bitan'izy ireo dia akaiky na mitovy amin'ny famonoana titanium fiaramanidina, ny vidiny dia ahena manodidina ny 50%, noho izany ny teknolojia fanariana titane dia nivoatra haingana. Antenaina fa amin'ny ho avy tsy ho ela, dia hahatratra ilay toerana manan-danja mitovy amin'ny firaka titanium vita.
Ny fomba fanariana ny titanium
Ny fanariana titanium dia matetika ampiasaina amin'ny lafaoro fanalefahana banga sy fanariana grafita. Raha ampitahaina amin'ny alika marefo amin'ny endriny mitovy, ny herin'izy ireo dia mitovy amin'ny ankapobeny, fa ny plastika sy ny harerahana kosa dia manodidina ny 40% -50% ambany, ary ny hamafin'ny vaky dia somary tsara kokoa. Ny ankamaroan'ny casting titanium dia voatsabo amin'ny fanamafisam-peo. Ny fitsaboana vahaolana sy ny fitsaboana hydrogenation eo am-pandinihina dia afaka manadio ny firafitry ny firaka ary mampitombo ny tanjaky ny havizanana amin'ny haavon'ny fametahana.
1.Ny grafite Casting of Titanium
Ny grafita no tena famolavolana ny famolavolana casting titanium sivily. Izy io dia mizara amin'ny karazana grafite fanodinana sy ny grafing tamping type. Ny bobongolo grafita voahodina dia vita amin'ny alàlan'ny fanodinana manual na mekanika ireo sakana grafita artifisialy avo lenta. Raha ny fahasarotan'ny bobongolo dia azo ampiasaina ny fitambarana sakana mihetsika marobe. Ity lasitra ity dia azo ampiasaina imbetsaka. Ny karazana tamping grafita dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fitotoana sy ny fampifangaroana ny fasika grafit artifisialy sy ny binder organika karbonika ho fifangaroana, izay novolavolain'ny tanana na ny maodely fanaovana modely anaty lasitra hazo na boaty fasika amam-by. Ny bobongolo fasika grafita vita dia namboarina, maina ary nohamafisina tamin'ny mari-pana ambany, ary avy eo nalefa tamin'ny hafanana avo teo ambanin'ny fonon'ny vovoka grafit miparitaka maina na eo ambany fiarovan'ny atmosfera tsy mihombo. Aorian'ny nanaovana ny fitambaran'ny bobongolo dia azo apetraka ao anaty lafaoro izy io handatsahana azy. Ho an'ny famokarana casting aerospace miaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny kalitao hentitra, ny karazana fanodinana sy ny fanodikodinana dia mila foanana alohan'ny handavana azy
2.Ny fampiasam-bola fanariana titanium
Ny fanariana fampiasam-bola no dingana lehibe indrindra amin'ny famokarana firaka firaka titanium ho an'ny fiaramanidina miaraka amina fametrahana avo lenta, endrika sarotra, endrika ambonin-tany ary atiny matevina. Ny fomba fanariana fampiasam-bola amin'ny titanium dia mitovy amin'ny fizotrany fanodinana vy, afa-tsy ny akora akorandriaka sy ny fizotrany sasany. Misy dingana telo ampiasaina hamokarana casting titanium ankehitriny:
- Drafitra akorandrafy.
- Teknolojia vita amin'ny keramika misy sosona vy.
- Dingana vita amin'ny seramika vita amin'ny keramika. Ny karazany voalohany dia mora vidy ary azo ampiasaina amin'ny famokarana casting kely sy salantsalany, ary ny roa farany dia azo ampiasaina amin'ny famokarana Casting rindrina matevina lehibe.
Fanariana firaka titanium sy kalitao fanariana Ny ankamaroan'ny titane titanium tsy mety simba dia azo ampiasaina amin'ny fanariana, ny be mpampiasa indrindra dia ny firaka Ti-6A1-4V. Manana fananana fanariana tsara sy fananana fandaminana azo antoka izy io. Raha ampitahaina amin'ny firaka deformation mitovy fitoviana, ny tanjaky ny firaka titanium dia mitovy amin'ny ankapobeny, fa ny plastika sy ny havizanana kosa dia manodidina ny 40% -50% ambany, ary ny hamafin'ny vaky dia somary tsara kokoa.
Ny fanariana titanium amin'ny ankapobeny dia voatsabo miaraka amin'ny fanamafisam-peo maharitra. Ny fitsaboana vahaolana sy ny fitsaboana hydrogenation eo am-pandinihana dia afaka manadio ireo voamaina, manatsara ny firafitra ary manatsara ny faharerahana ataon'ny firaka mankany amin'ny haavon'ny fametahana. Ny fanindry isostatika mafana dia fomba fitsaboana mahazatra amin'ny filan'ny titanium avo lenta. Taorian'ny hafanana ambony sy ny fitsaboana amin'ny tsindry ambony dia tsy miova ny haben'ny casting fa ny firafitra anatiny kosa mihalehibe, ary hihatsara ny fahamarinan-toetran'ny mekanika. Ny kalitaon'ny casting dia tokony hojerena araka ny fenitra nasionaly GB6614, fenitra miaramila nasionaly GJB2896 na fenitra fiaramanidina HB5448. Ny toetra ara-teknikan'ny casting firaka titanium dia voatanisa ao amin'ny latabatra
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe momba ny casting Titanium
Safidio ny mpamatsy casting Titanium tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany amin'ny fanariana titanium dia aondrana any Amerika, Canada, Australia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Ny serivisy fanamboarana titanium fanaonay manokana dia manome filaharana maharitra sy mora vidy izay mifanaraka amin'ny famaritana anao ho an'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina, ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny olonay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetikadinao fanariana titanium.